VAROTRA SY FANJIFANA
Mivoaka ampahibemaso amin’izay ny adin’ireo vehivavy manodidina ny Filoha. Taorian’ilay kabary izay nolazaina fa mivantana kanefa tsy izany akory ary feno diso ny votoatiny, dia niala bala ny minisitry ny serasera,
Voatendry ho governoran’ny faritra Atsinanana nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly Atoa Rafidison Richard Théodore.
LUDY SOA SY NATHAN
Araka ny lahatsoratra nivoaka teto amin`ny gazety Tia Tanindrazana ny 02 martsa lasa teo, momba an`ireo tanora, LudySoa sy Nathan,
MBOLA AVOTRA ALOHA HATRETO
Isan'ireo firenena afrikanina mbola mahavita miaro ny sisin-tany aloha hatreto i Madagasikara manoloana ny fiparitahan’ny Coronavirus.
MPIANATRY NY PETIT NID TSY HITA POPOKA
Tovolahy kely iray mitondra ny anarana hoe Rakotonindrina Sitraky ny Avo Toavina Cedrick no nambaran’ny fianakaviany fa tsy hita popoka.
Raikitra ny fifampitifirana tetsy Mahavelona. Sady nitsoaka no nitifitra ny jiolahy izay vao avy nanao fanafihana mpandeha tamin'ny taxi-brousse.
Mitohy hatrany ny fanafihana cashpoint eto an-drenivohitra.
Nandainga avokoa ny fandajàna marobe izay nanaovana fitsirihana tampoka tao amin’ny tsena Bazary-Kely ao Toamasina.
Ireo mpivarotra hazan-drano no tena voamarika fa mangala-danja ary tonga hatramin’ny fahefan’ny kilao izany. Nogiazana ireo fitaovana ary nampitandremana kosa ny mpivarotra izay voakasika. Misy hatramin’ny vatomizana no efa namboarina natao mavesatra kokoa mba hanamora ny halatra.
OLONA NOTSATOTSATOHANA ANTSY
Notsatohana antsy teo imasom-bahoaka ary tamin’ny andro tsena ny mpiasan’ny kaominina izay nanome baiko fandaminana ny mpivarotra. Izany habibiana izany no niseho tao amin’ny tsenan’Ambongamarina-Amparafaravola. Soa fa voasambotry ny olona avy hatrany ilay mpivarotra nahavanon-doza. Saika teo ihany dia vita ny aminy fa mba haingana dia tonga ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana.
LALANA POTIKA SAHADY
Potika efa hatramin’ny 40% sahady ireo lalana izay vao nandaniana volabe. Efa mitaraina tanteraka ny mpampiasa lalana eto an-drenivohitra satria feno lavaka izay aleha ary indrindra koa tsy ho ary vita tsianjery avokoa satria betsaka loatra. Mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe mba iza loatra ny injenera nanatontosa ireo fotodrafitrasa izay potika isaky ny mandeha ireo. Mba misy fitiavan-tanidrazana ve ? Efa fantatra ihany fa fidiram-bolan’ny sy kiantranoantranon’ny mpanankarena eto an-tanàna ny fanaovan-dalana.
RAHARAHA ÎLES EPARSES
Mihizingizina fatratra ireo mpiaro ny Nosy manodidina fa ataon’ny Frantsay saribakoly fotsiny ny Malagasy momba ny fifampiresahana ny famerenana ireo nosy ireo. Efa manana tetikasa goavana momba ny « îles éparses » ireo Frantsay ka tsy hamela mora ny fanomezana azy ireo ho an’ny Malagasy hoy i Arlette Ramaroson, mpahay lalàna iraisam-pirenena. Mila manova stratejia hitakiana ny fitondrana raha te hahazo ireo satria raha tsy izany dia very maina ny ezaka izay natao.